Karaiba: Mitodika Amin’i Mumbai ny Maso · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 09 Jolay 2018 4:54 GMT
Firenena telo any Karaiba, Guyana, Suriname, ary Trinité sy Tobago no ahitana olona marobe indrindra manana fiaviana indiana ao amin'ny mponina ao aminy, ary maro ireo firenena miteny angilisy ao amin'ny faritra no manana fifandraisana ara-koltoraly amin'i India, izay manana ny loharano iraisana niaviany avy amin'ny fanjanahan'ny britanika taloha. Ny cricket [amin'ny fiteny anglisy], fanatanjahantena “nasionaly” na any Antilles miteny angilisy izany na any India, no ohatra tsara indrindra. Tsy misy fahagagana, marobe ireo mponina ao Karaiba sy ireo blaogera no nanaraka akaiky an'ireo fampihorohoroana vao haingana tao Mumbai tanaty horohoro sy alahelo be.
Raha tonga ireo vaovao mahatsiravina ny harivan'ny alarobia 26 novambra, nanontany tena ny MediaCritic eo amin'ny blaogy Living Guyana [amin'ny fiteny anglisy, sahala amin'ireo blaogy rehetra tanisaina ato] momba izay fomba handrakofan'ireo media ao Guyana an'ireo fampihorohoroana tao Mumbai:
Raha olona 80 no maty tamin'ireo fampihorohoroana 5 samihafa tany aminà tanàna tokana tao Etazonia, dia mety ho hita any anatin'ireo vaovao tselatra an'ireo fantsona fahitalavitra rehetra ao an-toerana izany.
Ndao ho jerentsika raha toa io vaovao io no hanombohan'ireo vaovao eo an-toerana, na raha toa nofidian'izy ireo ny hanambara izany ao anatin'ireo vaovao iraisam-pirenena, na ihany koa hanala tsy hilaza izany tsotra izao izy ireo.
Ny alin'iny, nilaza izy fa: “araka ny efa nampoizina, tsy nilaza izany velively ireo vaovao eto an-toerana .” Manampy izy fa: “miandry ireo vaovao mafàna avy any India ireo olona, fa tsy ireo zavatra tsinontsinona fantenan'ny CNN sy omeny antska “
Manazava i Ian Ramjohn, lehilahy iray avy any Trinité iray monina ao Etazonia, fa ny tranga ao Mumbai dia mampatsiahy azy amin'ny fomba mampiahiahy ny andrana fanonganam-panjakana izay niseho tamin'ny taona 1990 tao Trinité sy Tobago, nandritra izany no nakana ankeriny ny praiminisitra sy ireo olona hafa ary nitarika fahasimbana goavana tao amin'ny tanànan'i Port of Spain. “Tahaka ny toa miaina kely indray ny fiainana mampivarahontsana teo amin'ny fiainany. Tsy tena hoe miaina indray an'io, fa sahala amin'ny toa mitovy.” Manampy izy hoe:
Isika ihany no mizaka ny vokatr'ireo niainantska. Tsy vitako ny mijery ireo trangan-javatra niseho tao Mumbai raha tsy amin'ny alàlan'ny fitantavana'ny zavatra niainako manokana. Afaka manampy ahy izany na tena manimba ahy …… Manaitra ahy ny polisy, miaraka amin'ireo satroby fiarovana sy ireo basy tranainy. Azo heverina ho mifanaraka amin'ny fifehezana hetsi-bahoaka an-tanandehibe izy ireo (saingy eto, mbola mahagaga ahy ihany koa ny fisian'ireo fiarovana endrika vita amin'ny vy fa tsy plastika) fa tsy fiarovana amin'ireo Kalachnikovs sy ireo grenady. Ary mbola eto hatrany, nampitamberina amiko ny fanonganam-panjakana.
Annie Paul, mpanoratra sy indiana mpitsikera iray monina any Jamaika, no nandefa ampahany tamin'ny resadresaka tao amin'ny Facebook, hitany “kisendrasendra”, nifanaovan'ireo andian-jatovo indiana miady hevitra mikasika ireo laharam-pahamehana ho an'ny firenena, ao anatin'ireo fanafihana tao Mumbai. Manomboka toy izao ity resadresaka ity: “Fotoana izao tokony hampitsaharan'i India ny fandefasana an'ireo iraka eny an'habakabaka ary hanombohany mametraka ny fiarovam-pirenena…”. manao fanamarihana mitovy amin'izay ny blaogy Guyana Providence Stadium:
Sahala amin'ny toa manjaka ao India tanteraka ny raharaha sarotra, ny korontana sy ny fanomezam-baovao tsy marina, raha jerena, izay no tsapa alefan'ny CNN… Ilay India vao avy nandefa zanabolana ho eny amin'ny Volana ihnay ve io?
Blaogera iray avy any Bermode, mpianatra ao Grande-Bretagne, Jonnystar no manoritsoritra ny fihetsik'ireo mpianatra amin'ny dingana fahatelo amin'ny anjerimanontolo avy ao amin'ny toeram-ponenany, anisany maro an'isa amin'ireo “ny Pakistaney sy ny Indiana”.
Mitangorona manoloana an'ireo solosaina sy ireo fahitalavitra ireo mpianatra avy amin”ireo firenena roa ireo, tao amin'ny trano fialantsasatra akaiky indrindra teo. Toa niainan'izy ireo ny tahotra mifangaro, fandinihana lalina ampahanginana sy ireo andrana tsy hay tohaina mba hifandray amin'ny fianakaviany sy ireo namany izay nipetraka, niasa, nianatra na niala sasatra tao Mumbai .
Amin'ny fomba maneso, ahafahantsika mahazo vaovao kokoa avy ao Edinburg ireo teknolojia noho ny avy any Mumbai. Mandritra izany, nisa ho toy ny fantsona mpampita vaovao ireo mpianatra ao Ecosse tamin'ny alalan'ny fandefasana ny lisitr'ireo naratra, ireo hopitaly nisy azy ireo, ireo tsy naninona, sy ny sisa… Fanampin'izay, tototra na natsahatr'ireo tomponandraikitra ireo fantsona amin'ny finday ao Mumbai, tsy misy olona tena nahafantatra.
Manampy izy hoe: “tsy misy marika maneho fifanenjanana eo amin'ireo mpianatra indiana sy pakistaney eto, tebiteby ifampizaràna sy fankahalàna naterak'ireo habibiana nitranga no misy.”